Wamkelekile Amalungu New
× Wamkelekile kwi iqonga yethu!
Sixelele namalungu ethu ngubani na, ukuba uthanda ntoni kwaye kutheni waba lilungu Rikoooo.
Siyayamkela onke amalungu amatsha kwaye ndithemba ukunibona ngeenxa kakhulu!
ingalungiswa Happy Bunny
iinyanga 9 6 iintsuku ezidlulileyo #1118 by Yohane omdala
Njengoko lam igama lomsebenzisi libonisa ukuba ndiphezu kwe60. Amava okwenene ehlabathini endibalekayo kwangexesha elidlulileyo kwiCompmunk kunye neVickers Varsity. Ndaqalisa ukuhamba kwendiza ngeminyaka eyi-16 edlulileyo kunye ne-FS eyi-centenary flight kunye nepc kwihlabathi lePC. Kule minyaka ndichithe i-fortune kwi-software kunye ne-hardware, ngokukhawuleza ukuzama ukunyaniseka. Ngoku ndinomgangatho ophezulu phakathi kweP PC ukusuka kuChillblast. I-Oculus VR kunye ne-orbx indawo. I-pc yam yathengwa ngoJulayi 2017 kwaye iza ne-Windows 10. Emva koko ndibeka i-FSX Steam kuyo. Konke oku kuye kwaba kulandelelwano lwendiza ethile. UDouglas DC3. I-Flight Flight Legends of Flight iphantse iphelele, njengoko ndihlala eLisolshire kude ne RAF Coningsby kunye ne-Battle of Britain Memorial Flight kunye ne-Dakota ZA947. Ndiye ndwendwela rhoqo kwiDuxford kwilizwe lenene kunye nehlabathi elifanayo. Kukho i-freeware ekhangayo enokukhetha ukubonisa umoya ukuze ndiqhube kunye nenqaba ye-flying 'Sally B'. Konke kulungile kwihlabathi lam kodwa ke kuza i-big bang. I-FSX Steam yagqiba ukuba ayiyi kudlala kakuhle nge-Windows 10. Ngoko ke kufuneka ndilumle ibhola kwaye nditshintshele ku-P3D V4. Apha kufika i-Legends yeNqwelomoya ye-Flight DC3 ayiyi kulayishwa kwi-P3D. Akukho nanjalo i-freeware Duxford. Ngoko ukufumanisa i-C47 yakho yinto engunaphakade. Ufezekile, ndimele ndiyazi njengoko ndiye ndibe seDotota yangempela. Kulungile akukho mva. Kodwa ngokusondeleyo ngokoqobo njengokuba sim ufumana. Ukugxekwa kwam kuphela, akukho ama-niggles, isandi okanye ukungabi naso ngenxa yokutshintsha kunye neepompo zamanzi kunye nokuphuma kweefowuni. Ndiyibhabhisa i-paratrooper kwaye ndiyayithanda imilayezo ye-RAF. Unyaka ozayo kwihlabathi langempela kuya kuba neDaks phezu kweNormandy ukulahla i-parachutti kwiindawo ze-landing zaseNormandy. Ndiya kuhamba ngeenqwelo-moya. Ndiyathemba ukuba ndihambe eDakota. Kodwa kwakhona ndiyabonga ngale Dangota emnandi endiyayihlawula ngokuvuya.
UJohn Caselton (Omdala John)
Enkosi nalamkelayo: 22
iinyanga 9 6 iintsuku ezidlulileyo #1119 by rikoooo
Ndiyabonga ngokusungula kwakho okuhle. Sivuyiswa kukuba unokubhabhisa i-C47 kungekho nto. Siyakwamkela kwiforum.
UMlawuli Jikelele - - uErik wonwabe Soloko ukunceda
Ixesha ukwenza page: 0.172 imizuzwana